Gabar Soomaali Ah Oo Markii Ugu Horreysay U Tartameysa Billada Miss Minnesota USA (Video) - Hablaha Media Network
Gabar Soomaali Ah Oo Markii Ugu Horreysay U Tartameysa Billada Miss Minnesota USA (Video)
HMN:- Gabar dhallinyaro ah oo u dhalatay dalkeena Soomaaliya laguna magacaabo Halima Aden ayaa waxaa laga yaabaa inay xirato taajka Miss Minnesota USA iyadoo loo dooran karo Gabadha Ugu Qurxoon Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Halima Aden waa gabadhii ugu horreysay ee asal ahaan kasoo jeeda Somalia heysatana dhalashada America ee u tartanta billada Miss Minnesota USA.
Waxay ku dhalatay Xero Qaxooti oo ku taalla Kenya ka hor inta aysan qoyskeedu usoo guurin Mareykanka iyadoo 6 sanno jir ah. Halima Aden ayaana daaha ka qaaday inay sharaf u tahay inay tartankaan u matasho haweenka Muslimiinta ah oo dhan.
Minnesota waa halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan USA. Gabadhaan ayaana waxay tahay mid ku dhegan dhaqankeeda, iyadoo sheegtay in hanashada abaalmarintaan ay ka caawin karto inay ku daydaan hablo badan, ugu yaraanna ay sideeda oo kale u lebistaan.
Guul ayaan kuu rajeyneynaa Halima Aden.